Mpanamboatra sy mpamatsy fitaterana an-dranomasina ambongadiny | Ara-potoana
Ny fomba mahomby indrindra amin'ny fandefasana vola be. Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny fifandraisan'ny mpitatitra maharitra sy maharitra, ny GZ Ontime dia manome anao vahaolana mora azo sy azo antoka ary azo antoka ....
Ny fomba mahomby indrindra amin'ny fandefasana vola be.
Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny fifandraisan'ny mpitatitra maharitra sy maharitra, ny GZ Ontime dia manolotra anao ranomasina malefaka sy azo antoka ary azo antoka entanavahaolana. Ny mpanjifa dia manome lanja ny fahaizanay momba ny fandefasana entana amin'ny ranomasina iraisam-pirenena amin'ny tambajotran'izao tontolo izao izay misy firenena sy faritra enina amby efapolo. Manome lanja ny fahaizana mifandray amin'ny serivisy hafa izy ireo toy ny fanaterana ny entona, multimodalTransport, serivisy miampita sisintany, na fivarotana trano.
Mihoatra noho izany, fantatry ny mpanjifantsika fa mahatakatra an'izao tontolo izao amin'ny fomba fijeriny izahay, ary miasa mba hanohanana azy ireo sy ny orinasany. Ny foto-kevitra dia mandeha amin'ny zavatra rehetra ataontsika, manomboka amin'ny fikarohana ny fandaharam-potoana tsara indrindra ho an'ny fandefasana ka hatramin'ny fisafidianana ny fomba tsara indrindra handaminana azy; mizara na mizara enta-mavesatra; fampidirana serivisy fanampiny miampy sanda; ary manome serivisy azo antoka sy tsara kalitao. Raha tsorina, tsy avelanay handiso fanantenana ny mpanjifa.
Lozam-pifamoivoizana feno (FCL)
Ny fifandraisantsika efa hatry ny ela miaraka amin'ireo mpitatitra isan-karazany dia midika fa apetraka araka ny tokony ho izy isika mba hahazo toerana eny amin'ny sambo sy hahita ny fandaharam-potoana mety, miaraka amin'ny taha mifaninana. Ny serivisy FCL anay dia tohanan'ireo rafitra fanarahan-dàlana mifototra amin'ny tranonkala ahafahanao mahazo ny fahitana ny satan'ny fandefasana anao.
Manolotra fidirana amin'ny sambo FCL premium izay miasa miaraka amin'ny mavitrika amin'ny rojom-panomezana anao izahay. Miaraka amin'ny serivisy izay eo anelanelan'ny 10 ka hatramin'ny 50 andro, manana ekipa efa za-draharaha izahay amin'ny fiaviany sy toerana alehany izay afaka manampy anao hanatsara ny fandefasana tsirairay amin'ny vidiny, lalana, na fotoana fitaterana.
Mpitondra azo itokisana sy atokisana
Nifanarahana tamina mpitatitra azo atokisana sy azo atokisana izahay mba hiantohana ny entan'ny entanao amin'ny ora ara-potoana, araka ny voalahatra.
Manome serivisy premium amin'ny sambo avy any Shina izahay, hahazoana antoka fa tonga ara-potoana any amin'ny nalehany ny entana entinao, na dia mihoatra aza ny vola nomena.
Lanja Container kely (LCL)
Ny serivisy fampidiran-kaontenera ambany noho ny fitoeran-kaontenera anao dia manome anao fahafaha-miaina mifanaraka amin'ny takiana isan-karazany, azo antoka sy voafehy. Manome anao ny serivisy fanamafisana manokana, na Serivisy fanamafisana Multi-Country (MCCS) ho an'ny fandefasana sarotra kokoa, manohana anao amin'ny fitantanana ny vidin'ny fandefasana entana sy ny fotoana fandefasana. Ny serivisy LCL anay dia nohatsaraina tamin'ny alàlan'ny làlan-tserasera sy ny dian-tongotra, manampy anao hanana fifehezana ny fahitana ny fandefasana.
Ataontsika tsara kokoa ny rojom-panolorana
Ny tamba-jotra LCL dia manolotra fifandraisana sy fitambarana tsy manam-paharoa amin'ny zotram-pitaterana lehibe, sady ahafahan'ny mpanjifanay manatsara ny renivohitra miasa amin'ny alàlan'ny fividianana ny lisitry ny fangatahana.
Fanaraha-maso tsara kokoa ho an'ny fihenan'ny fihenan'ny
Izahay dia mizaha ny haitao ary manao izay hahamora ny fandefasana entana. Manomboka amin'ny fanaovana nomerika ny mombamomba ny mpanjifa ka hatrany amin'ny fandefasana vetivety, dia miantoka ny fihenan'ny risika amin'ny fizahana fadin-tseranana izahay.
Rehefa misafidy anay ianao, na dia mila bebe kokoa aza ny serivisy an-dranomasina, dia handeha hihoatra ny mihoatra izahay handanjalanjana fandefasana tonga lafatra. Isika tsirairay sy ny zava-drehetra ataontsika mba hahatonga anao manontoloFitaovam-pitaterana traikefa hahafeno ny zavatra antenainao.
1.DDP (Fandoavana adidy andoavam-bola), DDU (adidy fanaterana tsy voaloa)
2.Port mankany amin'ny seranana, varavarana mankany amin'ny varavarana, varavarana mankany amin'ny seranana, seranana mankany amin'ny varavarana
3. Famolavolana famandrihana mialoha sy fandefasana entana
Fiantohana 4. Cargo
6.Ny tanety Fitaovam-pitaterana fandaharana
7. Famerenana sy fanarahan-dia.
Ny fandefasana ranomasina iraisam-pirenena dia mety ho sarotra be amin'ny antontan-taratasy, fitsipika, vidiny ary ny fivezivezena. Manokana izahay amin'ny fanatsorana ity fomba ity, mamela anao tsy hanana fihenjanana sy fahafaham-po.
Ny traikefa sy ny fahaizanay betsaka amin'ny entam-barotra an-dranomasina, ampiarahina amin'ny serivisinay mpanjifa miavaka dia mahatonga anay hatoky tena fa afaka mamaly ny filanao rehetra izahay.
Aza malahelo. Ny vidiny ambany loatra na tolotra manintona loatra dia mazàna manafina ireo tsy ampoizina tsy mahafinaritra. Ny GZ Ontime no safidinao tsara indrindra amin'ny fitaterana ireo vokatrao an-dranomasina.
Teo aloha: Serivisy FedEx mandroso avy any Shina mankany amin'ny Fed Ex Ship DHL International Shipping rates Filipina
Manaraka: Agent Agent Dropshipping
Serivisy serivisy ho an'ny FedEx avy any Shina mankany amin'ny Fed Ex Sh ...